Yemutemo ziviso - Ikkaro
Ikkaro ndeya María Ángeles Franco Arce, NIF: 45799359B, ine kero pa, Sagunto, 46500, Valencia, Spain.
iyo email ikkowoweb (at) Gmail (pfungwa) ru
runhare (+34) 645 134 539
Zvekuonana zvemunhu anotungamira: María Ángeles Franco Arce ane email yekubata ikkaroweb (pa) gmail (dot) com
Mashandisiro aungaita kodzero dzako: Unogona kutumira kutaurirana kwakanyorwa kuhofisi yakanyoreswa yeMaría Ángeles Franco Arce kana kukero yeemail inoratidzwa mumusoro weichi chiziviso chepamutemo, kusanganisira muzviitiko zvese ikopi yeID yako kana rimwe gwaro rekuzivisa, kukumbira kushandiswa kwekodzero. zvinotevera:
Kodzero yekukumbira kuwana kune yako data: unogona kubvunza María Ángeles Franco Arce kana kambani iyi iri kubata data rako.
Kodzero yekukumbira kudzikisira kurapwa kwako, mune izvo zviitiko zvinongochengetwa chete naMaría Ángeles Franco Arce kuitira iko kurovedzwa kana kudzivirira kwezvaanotaura.
Kodzero yekuramba kurapwaMaría Ángeles Franco Arce achamira kugadzirisa data nenzira yaunoratidza, kunze kwekunge zvichimanikidza zvikonzero zvine mutsindo kana kurovedza kana kudzivirirwa kwezvavanogona kutaura vanofanira kuramba vachigadziriswa.
Kodzero yekutakurika kwedata: kana iwe uchida kuti data rako riongororwe neimwe fem, María Ángeles Franco Arce anofambisa kutakura kwedata rako kumunhu mutsva anotarisira.
Maitiro ekunyunyuta kuDare Rinodzora: Kana iwe ukafunga kuti pane dambudziko nenzira iyo María Ángeles Franco Arce ari kubata nayo data rako, unogona kunanga zvikumbiro zvako kuSecurity Manager weMaría Ángeles Franco Arce (inoratidzwa pamusoro) kana simba rekuchengetedza data zvinoenderana, kuva iyo Spanish Agency Yekuchengetedza Dhata, iyo yakaratidzwa muchiitiko cheSpain.
Mushandisi dhata yakadzvanywa naMaría Ángeles Franco Arce kumapeji uye maprofiles pasocial network: Kubva panguva iyo mushandisi anopa mvumo yake kusvikira vaibvisa.
María Ángeles Franco Arce anobvuma kushandisa iyo data, ku remekedza zvakavanzika zvavo uye kuzvishandisa zvinoenderana nechinangwa chavo, pamwe nekutevedzera zvavanosungirwa kuti vazvichengete uye nekugadzirisa matanho ese ekudzivirira kushandurwa, kurasikirwa, kurapwa kana kuwana zvisiri pamutemo, zvinoenderana nezvakatemwa neRoyal Decree 1720 / 2007 yaDecember 21, iyo inobvumidza Mitemo yekusimudzirwa kweOrganic Mutemo 15/1999 waZvita 13, Kudzivirirwa kweDunhu Dhata.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kuchengetedza yako data kuvandudzwa nguva dzese, uri wega unokonzeresa kusarongeka kana kunyepa kwedata rakapihwa uye nekukuvara uko kunogona kukonzeresa María Ángeles Franco Arce semuridzi webhusaiti ino, kana kune wechitatu mapato anofanirwa pakushandisa zvataurwa.
María Ángeles Franco Arce anotora matanho akakwana ekuchengetedza kuti aone kuvepo kwehutachiona, kurwisa kwechisimba uye jekiseni rekodhi.
Zvisinei, iwe unofanirwa kuziva kuti nzira dzekuchengetedza dzemakomputa paInternet hadzina kuvimbika zvachose uye kuti, saka, María Ángeles Franco Arce haagone kuvimbisa kusavapo kwemavhairasi kana zvimwe zvinhu zvinogona kukonzera shanduko mumakomputa masystem (software uye Hardware) yeMushandisi kana mune zvinyorwa zvavo zvemagetsi uye mafaera arimo.
Mukana wekuona pakakoromoka, María Ángeles Franco Arce anozvipira zivisa vashandisi mukati menguva yakareba yeawa makumi manomwe nemaviri.
Webhu uye kubata: Iyo webhusaiti ine SSL TLS v.1.2 encryption iyo inobvumidza iyo yakachengeteka kutumira yedunhu rega kuburikidza neyakajairwa mafomu mafomu, akaitirwa pamaseva ayo María Ángeles Franco Arce akabhadhara kubva kuBanahosting.
Dhata rakaunganidzwa kuburikidza newebhu. Iyo yega data yakaunganidzwa ichave inoenderana nekugadzirisa otomatiki uye inosanganisirwa mumafaira anoenderana ayo María Ángeles Franco Arce muridzi.
Fomu yekutenga: Kuti uwane izvo zvigadzirwa nemasevhisi anopiwa muzvitoro zvedu zvepamhepo, mushandisi ane fomu rekutenga zvichienderana nemamiriro ekubvumirana anotsanangurwa mumutemo wedu panodiwa ruzivo rwekufambidzana nerobhadharo. Iyo data inochengetwa paBanahosting maseva.
Tsamba dzenhau mafomu ekunyorera: María Ángeles Franco Arce anoshandisa Sendgrid, Feedburner kana Mailchimp tsamba yekutumira sevhisi, iyo inochengeta yako email data, zita uye kugamuchirwa kwekunyorera. Iwe unogona kukanzura kunyoreswa kune tsamba yemapepanhau chero nguva kuburikidza nechero chinongedzo chiri pazasi pega pega pekutumira chaunogamuchira
Instant mameseji: María Ángeles Franco Arce haape rubatsiro kuburikidza nekutumira mameseji, senge WhatsApp, Facebook Messenger kana Line.
Vatapi vebasa rekubhadhara: Kubudikidza newebhu, iwe unogona kuwana, kuburikidza nehukama, kune echitatu-bato mawebhusaiti, senge PayPal o mutsetse, kubhadhara mari yemasevhisi akapihwa naMaría Ángeles Franco Arce. Hapana nguva iyo vashandi veMaría Ángeles Franco Arce vane mukana wekuwana ruzivo rwebhangi (semuenzaniso, kiredhiti kiredhiti nhamba) iwe yaunopa kune vakadaro vechitatu mapato.
Kuvapo mumasaiti: María Ángeles Franco Arce ane maprofiles pane mamwe makuru enetiweki pasocial network.
Chinangwa uye chepamutemo: Kurapa uko María Ángeles Franco Arce achaita pamwe nedatha mukati meimwe netiweki dzambotaurwa ichave, kunyanya, iyo inobvumidzwa nesocial network kumaprofayiri emakambani. Nekudaro, María Ángeles Franco Arce anozokwanisa kuzivisa, kana mutemo usingazvirambidze, vateveri vake nenzira ipi neipi iyo pasocial network inobvumidza nezve zviitiko zvake, mharidzo, zvinopihwa, pamwe nekupa sevhisi yakasarudzika yevatengi.
Kuburitsa dhata: Hapana zvazvingaita kuti María Ángeles Franco Arce abudise dhata kubva pasocial network, kunze kwekunge mvumo yemushandisi yekuita yakadaro iri pachena uye yakanyorerwa.
Kodzero: Kana, nekuda kwehunhu chaihwo hwemasocial network, iko kushanda kwakanaka kwekodzero dzekuchengetedza dhata remuteveri kuri pasi pekushandurwa kwehunhu hweizvi, María Ángeles Franco Arce achakubatsira nekukupa zano kune izvi kusvika pamwero mikana yako.
Email. María Ángeles sevhisi yeemail yaFranco Arcese inopa kushandisa Sendgrid services.
Masocial network. María Ángeles Franco Arce anoshandisa maAmerican social network YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard kune iyo nyika inoitiswa data, yekuongorora uye hunyanzvi hunhu maererano newebhusaiti, iri pamaseva ayo María Angeles Franco Arce anobata iyo data iyo, kuburikidza navo, vashandisi, vanyoreri kana vafambisi vechikepe vanounza kukambani yeMaría Ángeles Franco Arce kana kuigovana nayo.
Vanopa mari. Saka kuti iwe ugone kubhadhara kuburikidza PayPal o mutsetse, María Ángeles Franco Arce achatumira iro rakanyatsodikanwa data reavo kune aya ekubhadhara ma processor kuti vaburitse inoenderana yekubhadhara chikumbiro.
Iwe uchagara uine kodzero yekuwana, kugadzirisa, kudzima, kukamurwa, kutakurika uye kukanganwa data rako.
Kubva panguva yaunonyoresa semushandisi pane ino webhusaiti, María Ángeles Franco Arce anokwanisa kuwana: Username neemail, IP kero, kero yepositi, ID / CIF neruzivo rwekubhadhara.
Chero zvazvingaitika, María Ángeles Franco Arce anochengetera kodzero yekugadzirisa, chero nguva uye pasina ziviso isati yasvika, asi achizivisa, kuratidzwa nekugadziriswa kwewebhusaiti seichi chiziviso chepamutemo.
Mukushandisa iyi webhusaiti, mushandisi anobvuma kusaita chero hunhu hunogona kukuvadza mufananidzo, zvido uye kodzero dzaMaría Ángeles Franco Arce kana wechitatu mapato kana izvo zvinogona kukuvadza, kuremadza kana kuwandisa portal kana izvo zvinogona kudzivirira, chero zvakadaro, iko kujairika kushandiswa kwewebhu.
Kune zvakare makuki anoenderana nemasocial network anoshandiswa newebhusaiti iyi vane yavo yavo macookie marongero.
Sponsored Ads, Affiliate Links, uye Kushambadzira
Isu tinopa zvinotsigirwa zvemukati, kushambadza uye / kana zvakabatana zvinongedzo. Ruzivo runowanikwa mune izvi zvinoshamwaridzana zvinongedzo kana zvakashambadzirwa zvinoshambadzirwa zvinopihwa nevashambadzi ivo pachavo, Isu hatina mhaka yezvinogona kunge zvisiri izvo kana zvikanganiso zvinogona kunge zviine kushambadza, uye ini handivimbise munzira ipi neipi ruzivo, kuvimbika kana basa revashambadzi kana mhando yezvigadzirwa zvavo uye / kana masevhisi.
Amazon Inobatanidza Cherechedzo Yemutemo
Ini zvakare ndinokuzivisa iwe kuti pakati pezvakabatana zvinongedzo zvaunogona kuwana mune ino blog zvimwe ndizvo kubva kuAmazon yakabatana chirongwa (kwandakanyorera), saka ndine basa rekukuzivisa ichi chiziviso kubva kuAmazon Affiliates, icho muchidimbu chinotsanangura kuti ini handisi mhaka yezvinyorwa zvisirizvo zvinogona kunge zviri mune ruzivo rwunoratidzwa pawebhusaiti yeAmazon (zita rezvigadzirwa , tsananguro, mutengo, kuwanikwa, nezvimwewo):
"Mitengo uye kuwanikwa kwechigadzirwa kwakarurama kubva pazuva / nguva yakatarwa uye zvinogona kuchinja. Chero mutengo uye ruzivo rwekuwanika rwakaratidzwa panzvimbo yeAmazon panguva yekutenga ichashanda pakutengwa kwechigadzirwa ichi."
“Zvimwe zvirimo zvinoonekwa panzvimbo ino zvinobva kuAmazon Services LLC. Izvi zvirimo zvinopihwa 'sezvazviri' uye zvinoenderana nekushandurwa kana kubviswa chero nguva. "
Mafungiro akataurwa mavari haanyatso kuratidza maonero aMaría Ángeles Franco Arce.
Kubudikidza neMaitiro Akawanda, hapana huchenjeri kana kodzero yezvivakwa zveindasitiri inoendeswa kune iyo portal kana kune chero chinhu chayo chezvinhu, kubereka, shanduko, kugovana, kutaurirana neruzhinji, kupa kuti ruzhinji, kuburitsa, kushandisazve, kurambidzwa zvakajeka kune Mushandisi kuendesa mberi kana kushandisa chero hupi hunhu, nenzira dzese kana maitiro, ehumwe hwazvo, kunze kwekunge pazvinotenderwa zviri pamutemo kana kupihwa mvumo nemubati wekodzero dzinoenderana.
Mushandisi anoziva uye anogamuchira kuti iyo webhusaiti yese, iine asi isingazadzise iwo mavara, mifananidzo, dhizaini, software, zvemukati (kusanganisira chimiro, sarudzo, kurongeka uye kuratidzwa kweiyo yakafanana), audiovisual zvinhu uye magirafu, inodzivirirwa nemaki ekutengesa, kodzero uye dzimwe kodzero dzepamutemo dzakanyoreswa, zvinoenderana nezvibvumirano zvepasi rese izvo Spain bato uye dzimwe kodzero dzepfuma nemitemo yeSpain.
Muchiitiko chekuti mushandisi kana wechitatu anofunga kuti kwave nekutyorwa kwekodzero dzavo dzepamutemo dzehungwaru nekuda kwekuunzwa kwezvimwe zvirimo pane saiti, vanofanirwa kuzivisa mamiriro aya kuna María Ángeles Franco Arce anoratidza:
Vashandisi vanogona kuendesa kune iyo Consumer Arbitration System iyo María Ángeles Franco Arce ichave chikamu chekugadzirisa chero kukakavara kana kudenha kunobva mune ino zvinyorwa kana kubva kune chero chiitiko cheMaría Ángeles Franco Arce, kunze kwekugadzirisa kusawirirana kunokonzera kukura kwechiitiko izvo zvinoda kuve nhengo, mune iyo mamiriro mushandisi anofanira kubata iro rinoenderana mutumbi wesangano rakakodzera remabhawa.
Vashandisi vane chinzvimbo chevatengi kana vashandisi sekutsanangurwa nemitemo yeSpain uye vanogara muEuropean Union, kana vakave nedambudziko nekutenga kwepamhepo kwakaitwa María Ángeles Franco Arce, kuyedza kusvika pachibvumirano chekunze kwedare enda ku Pamhepo Dispute Resolution Platform, Yakagadzirwa neEuropean Union uye yakagadziriswa neEuropean Commission pasi pe Mutemo (EU) 524/2013.
Iko kuwana uye / kana kushandiswa kweizvi kune wese anoita mamiriro eMushandisi, kubvuma, kubva panguva ino, zvizere uye pasina kupihwa kupi, chiziviso ichi chepamutemo, pamwe nemamiriro ezvinhu ayo, pazvinenge zvakakodzera, achizadzisa, mune hukama services uye zviri mukati meiyo portal.
Mushandisi anoziviswa, uye anobvuma, kuti kupinda kune ino webhusaiti hazvireve, munzira ipi neipi, kutanga kwehukama hwebhizinesi naMaría Ángeles Franco Arce. Nenzira iyi, mushandisi anobvuma kushandisa iyo webhusaiti, masevhisi ayo nezviri mukati pasina kutyora mutemo uripo, kutenda kwakanaka uye nerunyararo ruzhinji. Iko kushandiswa kwewebhusaiti nekuda zvisiri pamutemo kana zvinokuvadza zvinangwa, kana izvo, neimwe nzira, zvinogona kukuvadza kana kudzivirira kujairika kushanda kwewebhusaiti kunorambidzwa. Nezve zvirimo mune ino webhusaiti, zvinorambidzwa:
Chinangwa chega chehukama ndechekupa Mushandisi mukana wekuwana iwo maoneti uye nekuziva zvigadzirwa zvedu, kunyangwe María Ángeles Franco Arce asiri iye ane mhosva mune chero mhedzisiro yemhedzisiro inogona kutorwa kumushandisi nekuwana zvakataurwa zvinongedzo.
Mushandisi uyo anotarisira kumisikidza chero hunyanzvi hwekushandisa chinongedzo kubva pawebhusaiti yake kuenda kune portal anofanirwa kuwana mvumo yakanyorwa yakanyorwa yaMaría Ángeles Franco Arce.
Kugadzwa kweiyi link hakureve mune chero mamiriro ezvinhu kuvapo kwehukama pakati paMaría Ángeles Franco Arce uye muridzi wesaiti panosimbiswa chinongedzo, kana kugamuchirwa kana kubvumidzwa naMaría Ángeles Franco Arce yezviri mukati kana masevhisi.
Zvimwechetezvo, inoitisa, kunze kwekunge yapfuura, kuratidza uye kunyora kwakanyorwa mvumo yaMaría Ángeles Franco Arce kushandisa ruzivo rwurimo muwebhusaiti, chete ruzivo rwako, kutadza kunyatsoita kana zvisina kunangana kuita zvebhizimusi zvekushandisa zvemukati izvo zvaunogona kuwana .
Saiti ino inochengetera faira re data rine chekuita nemashoko akatumirwa kune ino saiti. Unogona kushandisa kodzero dzako dzekuwana, kugadzirisa, kudzima kana kupikisa nekutumira email kukero ikkaroweb (pa) gmail (dot) com.
Saiti ino, inosanganisirwa domains uye muridzi wezviri mukati ndeya María Ángeles Franco Arce.
Iyi webhusaiti ine ma hyperlink anotungamira kune mamwe mawebhusaiti anotarisirwa nevechitatu mapato kunze kwesangano redu. María Ángeles Franco Arce haavimbisi uye haasi iye ane basa nezviri mukati zvinounganidzwa pamapeji ewebhu akadaro.
Kunze kwekutaura kwakatemerwa, kwekutanga uye kwakanyorwa kwaMaría Ángeles Franco Arce, kubereka kunorambidzwa zvachose, kunze kwekushandisa zvakavanzika, shanduko, uye nechero imwe nzira yekushandisa, nechero nzira, yezvose kana chikamu chezviri mukati mewebhusaiti ino.
Izvo zvinorambidzwa zvachose kuita chero kudzvinyirira kana kushandurwa kwewebhusaiti pasina mvumo yekutanga yaMaría Ángeles Franco Arce. Nekudaro, María Ángeles Franco Arce haatore chero mutoro wakatorwa, kana izvo zvinogona kumuka, kubva mukuchinjika uku kana kushandiswa nevanhu vechitatu.
Iwe unogona kurovedza muviri, uchiremekedza iyo data yakaunganidzwa, kodzero dzinozivikanwa muOrganic Mutemo 15/1999, yekuwana, kugadzirisa kana kudzima kwedata uye kupikisa. Nechikonzero ichi, ndinokuzivisa kuti iwe unogona kushandisa kodzero idzi kuburikidza nechikumbiro chakanyorwa uye chakasainwa chaunogona kutumira, pamwe nekopikopi yeID yako kana gwaro rekuzivisa rakaenzana, kukero yepositi yaMaría Ángeles Franco Arce kana neemail. , yakanamatira kopi yeID ku: ikkaroweb (pa) gmail (dot) com. Pamberi pemazuva gumi tichapindura kuchikumbiro chako chekusimbisa kuitiswa kwekodzero yawakumbira kushandisa.
María Ángeles Franco Arce haapi vimbiso ipi neipi kana iye ari iye ane mhosva, mune chero zvazvingava, zvekukuvara kwechero hunhu hunogona kukonzerwa ne:
María Ángeles Franco Arce haatarisiri pasi pemamiriro ezvinhu chero api zvawo ekukuvara kunogona kubva mukushandiswa zvisiri pamutemo kana zvisina kunaka kwewebhusaiti ino.
Kazhinji, hukama pakati paMaría Ángeles Franco Arce nevashandisi vevashandi vepa telematic, varipo pane ino webhusaiti, vari pasi pemitemo nemasimba eSpain.
Mushandisi anozivisa kuti akaudzwa nezve mamiriro ekuchengetedza dhata remunhu, kubvuma uye kubvuma kurapwa kwacho naMaría Ángeles Franco Arce, nenzira uye nekuda kwezvinangwa zvinoratidzwa mune ino yega yega.
Zvinoenderana nemutemo uripo iye zvino, María Ángeles Franco Arce haaite maitiro eSIPAM, saka haatumire maemail ekutengesa ayo asina kumbobvunzwa kana kupihwa mvumo nemushandisi. Nekudaro, mune yega yega mafomu pawebhu, Mushandisi ane mukana wekupa mvumo yake yekugamuchira Newsletter / Bulletin, zvisinei neruzivo rwekutengesa rwakakumbirwa nenguva.
1 taura nezve «Legal ziviso»
Chivabvu 27, 2020 pa6: 58 pm
ndinotenda zvinhu zvakanaka kukurudzira vanhu nezveuchi ……